लण्डन जाना खोज्दा माओवादी नेता सिपी गजुरेलले किन कुटाई खाए? - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
नेपालमा हाम्रो पार्टीले सुरु गरेको जनयुद्धले विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो । देशभित्र माओवादी युद्धलाई दमन गर्ने नीतिअन्तर्गत तात्कालीन सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै हथकन्डा प्रयोग गरिरहेका थिए । हामी पनि त्यसको काउन्टरमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा जनयुद्धको रक्षा, विकासका लागि उत्तिकै प्रचार–प्रचारमा लागिरहेका थियौँ । देशभित्र हाम्रा टाउकाको मूल्य तोकिएको थियो । यस्तो वेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जनयुद्धको विकासअनुसार प्रचारप्रसार पुगिरहेको थिएन । पार्टीले माथिल्लो स्तरबाटै प्रचारमा पहलकदमी लिने नीतिगत निर्णय लियो ।
कसरी ? यस विषयमा रिम कमिटीमा पनि छलफल चल्यो । त्यो कमिटीले पनि हाम्रो पार्टीको त्यस्तो निर्णयलाई स्वागत मात्र गरेन, त्यसका लागि आवश्यक सहयोगसमेत पु-याउने निर्णय ग-यो।
तर, युरोप कसरी जाने ? भिसा कसरी बनाउने ? सम्पूर्ण प्रक्रिया कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने चुनौती थियो । हामीलाई नेपालमा टाउकाको मूल्य तोकिएको अवस्था थियो । त्यस्तो वेला विदेशबाट नै कसैले पासपोर्ट सहयोग गरे सजिलो हुने सल्लाह भयो । त्यसका लागि साथीहरूले पहल गर्नुभयो । त्यहीवेला एकजना ब्रिटिसले नेपालको क्रान्तिका लागि मेरो सहयोग हुनेछ भनेर भारतमा भिसा लागेको आफ्नो पासपोर्ट मलाई उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न तयार हुनुभयो।
उसले शंका गर्न थाल्यो भन्ने मलाई परिरहेकै थियो । उनीहरूले अनेक खालका प्रश्न तेस्र्याउन थाले । मैले नअड्कीकनै सबै बताइरहेँ । त्यहीवेला एकजना ब्रिटिस महिला आइन् । उनका श्रीमान् ब्रिटिस हाई कमिसनमा काम गर्दा रहेछन् । उनका श्रीमान् लन्डन जाँदै रहेछन् । तिनी भिआइपी भएकाले उनलाई माथिसम्म जान दिएका रहेछन् । उनी आफ्ना श्रीमान्लाई छाड्न भनेर माथि पुगेर फर्केर आउँदै रहिछन् । मलाई केराकार गरिरहेकाहरूले ‘म्याडम ! अलिकति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्दै बोलाए । उनले भनिन्, ‘किन नसक्नु?’
त्यसपछि मलाई केरकार गरिरहेकाहरूले ‘उहासँग ब्रिटिस पासपोर्ट छ, तर पासपोर्टमा प्रयोग गरिएको उहाँको फोटोमा अलिकति समस्या देखिएको छ । यस विषयमा खोजीनीति गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न।’
उनले पनि खुसी हुँदै भनिन्, ‘हुन्छ, म सहयोग गर्छु ।’ त्यसपछि ती महिला मसँग बयान लिन थालिन् । उनले पनि तिनै प्रश्न गर्न थालिन्, जुन पासपोर्टमा लेखिएको थियो । मैले पहिले दिएअनुसारकै जवाफ दिइरहेको थिएँ।
मैले लन्डनकै एउटा अस्पतालमा काम गर्ने बताएको थिएँ । उनी लन्डनकै रहिछिन् । जुन अस्पतालमा मैले काम गर्ने बताइरहेको थिएँ, ती महिलाका आफ्नै काका ‘सर्जन’का रूपमा काम गर्ने रहेछन्।
उनले भनिन्, ‘मेरो काका पनि तपाईंले काम गर्ने अस्पतालमै काम गर्नुहुन्छ ।’ म उनलाई खुसी बनाएर बयानबाट फुत्कन चाहान्थेँ । मैले भने, ‘राम्रै भयो, तपाईं मेरै अस्पतालमा काम गर्ने साथीको आफन्त हुनुहुँदो रहेछ । केही खबर भए भन्नुहोला, हाम्रो भोलि नै भेट हुन्छ, म सुनाइदिन्छु।’
तर, उनले आजै मात्र टेलिफोनमा काकासँग कुराकानी भएको बताइन् । उनले सोध्दै गइन्, ‘तपाईं अस्पतालसम्म केमा जानुहुन्छ ?’ मैले भने, ‘सुरुङ मार्ग हुँदै जाने टेनबाट जान्छु।’
उनी त ‘काहाँबाट ट्रेन चढ्नुहुन्छ ? कतिवटा स्टेसन पार गरेर पुग्नुहुन्छ ?’ आदि–इत्यादि पो सोध्न थालिन् । त्यसको सम्पूर्ण फेहरिस्त मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । थाहा नपाएको कुरा गल्ती भन्नुभन्दा नबोल्नु उचित ठानेँ । त्यसपछि मैले उनलाई भनेँ, ‘तपाईं एउटा ब्रिटिस सरकारको कर्मचारी, म एउटा ब्रिटिस पासपोर्ट प्रयोग गर्ने मान्छे । तपाईं मलाई किन यतिधेरै केराकार गरिरहनुभएको छ ? के तपाईं इन्डियन पुलिस अफिसर्स हो र ? तपाईं एउटा ब्रिटिस नागरिकको हैसियतमा बस्नुस् न । तपाईंलाई आफ्नै देशका नागरिकलाई यसरी केरकार गर्ने अधिकार कसरी मिल्छ ? त्यो पुलिस अफिसर्सले गर्ने काम हो।’
पक्राउ गरेपछि पनि मलाई उनीहरूको त्यही प्रश्न थियो, ‘तपाईं को हो ? काहाँ जान लाग्नुभएको ? हामीलाई तपाईंको पासपोर्टमाथि शंका छ । अब तपाईंका बारेमा अनुसन्धान हुन्छ।’
मैले त्यही कुरा दोहो¥याइरहेँ । तर, उनीहरूले किन ती महिलाले पनि शंका छ भनिन् त ? भने ।
विस्तारै उनीहरू कडा हुन थाले । ममाथि याताना दिन सुरु गरे । ‘यो पासपोर्ट तपाईंको होइन, नढाट्नुहोस्,’ उनीहरू भन्थे।
मलाई रातभर सुत्न त के बस्नसमेत दिएनन् । अनिँदैमा रात बिताइयो । बिहान उनीहरूले एकजना ब्रिटिस हाइकमान्डको मान्छेलाई झिकाइसकेका रहेछन् । उनी बिहानै आइपुगे । आउनेबित्तिकै उनले भने, ‘तपाईंलाई कस्तो छ?’
मैले भनेँ, ‘पहिले दिसापिसाब गर्ने वातावरण मिलाई दिनुहोस्, मलाई उहाँहरूले दिसापिसाब गर्नसमेत दिइरहनुभएको छैन ।’ उनले ‘उहाँलाई किन ट्वाइलेट जान नदिएको ?’ भने । त्यसपछि मात्र मैले दिसापिसाब गर्न पाएँ।
ममाथि प्रश्नको झटारो सुरु भयो, ‘तपाईं को हो ?’ मैले त्यही जवाफ दो-याइरहेँ। (नयाँ पत्रिकाबाट)